ပုရိသတို့ရဲ့ ရင်ခုန်သံစည်းချက်တွေ လွဲမှားသွားလောက်အောင် အလန်းစားပုံတွေကို ရွေးပြီးချပြလိုက်တဲ့ နန်းသီရိမောင်ရဲ့ စပါယ်ရှယ်ပုံအလန်းများ – Shwe Ba
ပုရိသတို့ရဲ့ ရင်ခုန်သံစည်းချက်တွေ လွဲမှားသွားလောက်အောင် အလန်းစားပုံတွေကို ရွေးပြီးချပြလိုက်တဲ့ နန်းသီရိမောင်ရဲ့ စပါယ်ရှယ်ပုံအလန်းများ
By Shwe BaPosted on April 16, 2021 April 16, 2021
နန်းသီရိမောင် က တော့ တိုင်းရင်း သူ လေးဖြစ် ပြီး အမိုက် စား အချိုး ကျကျ ခန္ဓာ ကိုယ် အလှတရားပေါ်လွင် စေတဲ့ အလန်းစားပုံလေး တွေ နဲ့ ပုရိသတွေအသည်းနှလုံး ကို ဖမ်းစားထား တဲ့ မော်ဒယ်မလေး ဘဲ ဖြစ်ပါ တယ်..။သူမ ရဲ့ အမိုက်စား ဖက်ရှင်တွေ နဲ့ အလန်းစား ပုံလေးတွေ ကတော့ ပရိသတ် တွေ အတွက် ကြွေသွား စေလောက် တာ အမှန် ပဲ ဖြ စ်ပါ တယ်..။ ဖြူဖွေး နေ တဲ့ သားရည် နဲ့ သွယ်လျ ပြေပြစ် တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေး တွေ ကြောင့်လည်း ပုရိသတွေ ကို ကြွေစေ ခဲ့တာ ဖြစ်ပါ တယ် … ။
နန်း က တော့ သူမ ရဲ့ ဆွဲ မက် စရာ ကောင်းတဲ့ ကောက်ကြောင်း အလှတရားတွေ ကြောင့် ပရိသတ် တွေ ကြားမှာ ရေပန်းစား နေလေး ဖြစ်ပြီး ဆွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့ အလှ အပ တွေ ကြောင့် အမြဲ အချစ်ပိုစေ သူလေး ဖြစ်ပါ တယ်..။သူမ ကတော့ သာမန်model လေး တစ်ယောက် အဖြစ် နဲ့ အနုပညာလေ ာက ထဲဝင်ရောက်လာ ခဲ့ ပေမယ့် သူမ ရဲ့ ကြိုးစားမှု တွေ ကြောင့် အခု အချိန်မှာ တော့ အားပေး သူ ပရိသတ်အခိုင်အမာ ရရှိလာတဲ့ အနုပညာရှင် မလေးတစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါ တယ်..။လတ်တလော မှာတော့ ကမ်းခြေ လေး မှာ အလန်းစား ရိုက်ထား တဲ့ အမိုက်စား ပုံလေး တွေ ကို ဖော်ပြ ထားတာ တွေ့ရပါ တယ်..။
ပုံလေး တွေ တိုင်း မှာ နန်းတစ်ယောက် ဆွဲဆောင်မှု ရှိရှိနဲ့ ချစ်ဖို့ကောင်းနေ တာလည်းဖြစ် ပါ တယ်..။သူမက တော့ လတ်တလော လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာ မှာ အမျိုးသား တွေ ရဲ့ ဝန်းရံခြင်း ကို ခံနေရတာ ဖြစ်ပြီး လူကြိုက်များ လာတဲ့ မော်ဒယ် အမိုက်စားလေး ဖြစ် ပါ တယ်..။ကဲ…ချစ် ပရိသတ်တွေ တွက် နန်း ရဲ့ ဗီဒီယိုလေးတွေ ကို မျှ ဝေ ပေးလိုက် ပါ တယ် … . ။
နန္းသီရိေမာင္ က ေတာ့ တိုင္းရင္းသူ ေလးျဖစ္ၿပီး အမိုက္ စား အခ်ိဳးက်က် ခႏၶာကိုယ္ အလွတရားေပၚလြင္ ေစတဲ့ အလန္းစားပုံေလး ေတြ နဲ႔ ပုရိသေတြအသည္းႏွလုံး ကို ဖမ္းစားထား တဲ့ ေမာ္ဒယ္မေလး ဘဲ ျဖစ္ပါ တယ္..။သူမ ရဲ့ အမိုက္စား ဖက္ရွင္ေတြ နဲ႔ အလန္းစား ပုံေလးေတြ ကေတာ့ ပရိသတ္ ေတြ အတြက္ ေႂကြသြား ေစေလာက္ တာ အမွန္ ပဲ ၿဖ စ္ပါ တယ္..။ ျဖဴေဖြး ေန တဲ့ သားရည္ နဲ႔ သြယ္လ် ေျပျပစ္ တဲ့ ခႏၶာကိုယ္ေလး ေတြ ေၾကာင့္လည္း ပုရိသေတြ ကို ေႂကြေစ ခဲ့တာ ျဖစ္ပါ တယ္ … ။
နန္း က ေတာ့ သူမ ရဲ့ ဆြဲ မက္ စရာ ေကာင္းတဲ့ ေကာက္ေၾကာင္း အလွတရားေတြ ေၾကာင့္ ပရိသတ္ ေတြ ၾကားမွာ ေရပန္းစား ေနေလး ျဖစ္ၿပီး ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိတဲ့ အလွ အပ ေတြ ေၾကာင့္ အျမဲ အခ်စ္ပိုေစ သူေလး ျဖစ္ပါ တယ္..။သူမ ကေတာ့ သာမန္model ေလး တစ္ေယာက္ အျဖစ္ နဲ႔ အႏုပညာေလ ာက ထဲဝင္ေရာက္လာ ခဲ့ ေပမယ့္ သူမ ရဲ့ ႀကိဳးစားမႈ ေတြ ေၾကာင့္ အခု အခ်ိန္မွာ ေတာ့ အားေပး သူ ပရိသတ္အခိုင္အမာ ရရွိလာတဲ့ အႏုပညာရွင္ မေလးတစ္ဦးပဲ ျဖစ္ပါ တယ္..။လတ္တေလာ မွာေတာ့ ကမ္းေၿခ ေလး မွာ အလန္းစား ရိုက္ထား တဲ့ အမိုက္စား ပုံေလး ေတြ ကို ေဖာ္ၿပ ထားတာ ေတြ႕ရပါ တယ္..။
ပုံေလး ေတြ တိုင္း မွာ နန္းတစ္ေယာက္ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိရွိနဲ႔ ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းေန တာလည္းျဖစ္ ပါ တယ္..။သူမက ေတာ့ လတ္တေလာ လူမႈကြန္ယက္ စာမ်က္ႏွာ မွာ အမ်ိဳးသား ေတြ ရဲ့ ဝန္းရံျခင္း ကို ခံေနရတာ ျဖစ္ၿပီး လူႀကိဳက္မ်ား လာတဲ့ ေမာ္ဒယ္ အမိုက္စားေလး ျဖစ္ ပါ တယ္..။ကဲ…ခ်စ္ ပရိသတ္ေတြ တြက္ နန္း ရဲ့ ဗီဒီယိုေလးေတြ ကို မၽွ ေဝ ေပးလိုက္ ပါ တယ္ … . ။
Previous post အရမ်းဟော့တဲ့ စတိုင်လေးနဲ့ ဆက်ဆီ ကျကျ အမိုက်စားပိုစ့်ပေးပြီး ဓာတ်ဖမ်းနေတဲ့ ပုံလေးတွေတင်ပေးလာတဲ့ နွယ်နွယ်ထွန်း
Next post ကြည့်ရှုသူတိုင်းရဲ့ ရွှေရင်အစုံ ကို တုန်ခါသွားစေမယ့် အရမ်းမိုက်တဲ့ ပုံလေးတွေကိုချပြလိုက်တဲ့ မင်းသမီးချောလေး အိချောပို